Fandaharam-pampianarana Sekoly - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Fandaharam-pampianarana Kilonga & Lisea
Misaotra anao nanadihady momba ny Fandaharam-pampianarana Sekoly.
Ny fitsangantsanganana sy ny fidiran'ny rehetra dia miato amin'izao fotoana izao raha toa ka mandinika indray ny fahafahantsika manolotra fandaharana ho avy aorian'ny Covid-19.
Mandritra izany fotoana izany dia manana ireto loharano manaraka ireto izahay azonao ampiasaina ao amin'ny efitrano fianaranao:
Maniry anao izahay handray anjara amin'ny vaovaonay E-Learning Platform novolavolaina ho an'ny ankizy Central Coast amin'ny serivisy fako sy fanodinana. Ny ankizy, ny mpampianatra ary ny ray aman-dreny dia afaka mandray ny quiz interactive ary ho lasa Garbologists mahafeno fepetra! Inona no tafiditra? Mila solosaina, tablette na telefaona finday ny mpianatra mba hidirana amin'ny lampihazo ary asaina mampiditra anarana, mifidy kilasy ary karazana sekoly ianarany. Hiroso amin'ny andian-dahatsary sy horonan-tsary isan-karazany izy ireo mba hianarana ny momba ny serivisy fanodinana fako sy fanodinana fako ao amin'ny Central Coasts – manomboka amin'ny zavatra azo atao ao amin'ny Toby Mavo, ka hatramin'ny zava-mitranga amin'ny bozaka apetrakao ao amin'ny Tobim-pamokarana Maitso sy ny anton'izany. zava-dehibe ny fampihenana ny fako ao amin'ny Red Lid Bin. Raha te hiditra amin'ny quiz dia tsidiho: https://learn.1coast.com.au/ ary safidio ny fanontaniana K-6 ho an'ny mpianatra ao amin'ny Sekoly Kilonga na ny fanontaniana 7-12 ho an'ny mpianatry ny Lisea.
Loharano fampahalalana momba ny mpampianatra: Mila fantarina hoe inona no mitranga amin'ny fanodinanao any amin'ny morontsiraka afovoany na ny fomba fiasan'ny fanariam-pako? Download Ny fanodinkodinana sy ny fitantanana ny fako ao amin'ny Loharanom-baovaon'ny Central Coast. Feno vaovao farany sy rohy mankany amin'ny horonan-tsary mifandraika amin'ny fitantanana ny fako, ny fanodinana, ny fambolena zaridaina ary ny fampihenana ny fako ao amin'ny Central Coast. Misy dika mitovy, azafady mailaka michelle.murrell@cleanaway.com.au Raha mila fanazavana fanampiny.
Taratasy fanamafisam-peo ho an'ny Sekoly Kilonga: Afaka manatitra ireny koa izahay any amin'ny Sekolinao any amin'ny morontsiraka afovoany miaraka amin'ny afisy sy bokikely. Alefaso azafady: michelle.murrell@cleanaway.com.au Raha mila fanazavana fanampiny.
Preschool Central Coast na Foibe fianarana aloha ve ianao? kitiho eto raha te hahalala bebe kokoa momba ny programa Little Sorters.
Raha te-hahazo vaovao momba ny Fandaharan'asan'ny Kilonga sy ny Sekoly ambony ianao dia ampidiro eto ambany ny antsipiriany mba hiditra ao amin'ny lisitry ny mailaka.
School TypeSekolin'ny PreSekoly ambaratonga voalohanyLycéeFikarakarana aorian'ny sekolyFikarakarana fialan-tsasatraTafe GroupanjerimanontoloOther
Naoty / taonan'ny mpianatra
Anaran'ny mpampianatra mifandray*
Andro / Daty hotsidihina
DD atsipy ny MM hikapoka YYYY